जाडोमा यसरी पढ्नुहोस् निद्रा लाग्दैन । दश उपाय । — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, शिक्षा, समचार, स्वास्थ्य → जाडोमा यसरी पढ्नुहोस् निद्रा लाग्दैन । दश उपाय ।
जाडोमा यसरी पढ्नुहोस् निद्रा लाग्दैन । दश उपाय ।
November 24, 2015४७६ पटक
मङसीर 8, काठमाण्डौ
चिसो बढ्ना साथ मानिसमा अल्छिपना देखिन्छ यो कुरा सामान्य नै हो । सानो ठूलो जुनसुकै उमेरका मानिसमा पनि यस्तो देखिन्छ । जब चिसोबढ्दै जान्छ मानिसलाई पढ्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्छ ।
त्यसमाथि पनि झन परीक्षाको समयमा त झन अल्छीपन दुई गुना बढ्ने गर्छ । तसर्थ यस किसिमको अल्छीपनाबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ त ? त्यसका केही सरल उपायहरू
१. गर्मी (बाक्लो)कपडा लगाएर पढ्न बस्नुहोस् ः जब चिसो बढ्न थाल्छ त्यसपछि पढ्न अल्छी लाग्नु स्वाभाविकै हो तर नपढी नहुनेभएपछि उपाय के त ? न्यानो कपडा लगाउनुहोस् किनकी स्वास्थ्यका लागि पनि चिसोबाट त बच्नै प¥यो । कम्बलको प्रयोग भरसक नगर्नु होस् । टोपी लगाउनु होस्, मोजा प्रयोग गर्नुहोस् । जाडो छेक्ने निहुँमा धेरै कपडा नलगाउनुहोस् कारण शरीरमा बोझमात्रै हुन्छ ।
२. सुतेर होइन बसेर पढ्नुहोेस् ः जाडोको समयमा खासगरी मानिसहरु हल्का छड्के परेर पढ्ने गर्छन् । यसरी पढ्नाले अल्छी पना बढ्छ र छिट्टै निद्रा लाग्छ । यसबाट बच्नको लागि कुर्चिमा बसेर पढ्नुहोस् या विस्तरामा बसेर पढ्नुहोस्
३. लगातार नपढ्नु होस् बिच बिचमा विश्राम गर्नुहोस् ः लगातार धेरै समय एकै ठाउँमा बसेर अध्ययन गर्नाले शरीरमा थकान बढ्ने निद्रा लाग्ने, हातखुट्टा झमझमाउने हुन्छ । तसर्थ बीचबीचमा विश्राम लिनुहोस् । त्यसोभएपछि थकाई मर्छ फ्रेस भईन्छ । र फेरी पढ्ने जाँगर लाग्छ ।
४.खानपानमा ध्यान दिनुहोस् ः चिसो मौसममा तातो तातो खानेकुरा खानमन लाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथिपनि हामी घरमा छौ भने त झनै बढी मन लाग्छ । धेरै खाना खाँदा जिउ भारी हुन्छ र अल्छीपन बढ्छ । तसर्थ जति मीठो भए पनि धेरै खाना नखानुहोस् ।
५. तातो पेय पदार्थ लिनुहोस् ः शरिरलाई पूmर्तिलो बनाई राख्न तातो चिया, कफि खान सके राम्रो हुन्छ । तातो पेयले अल्छी पनालाई हटाउँछ । चिया कफी उपलब्ध छैन भने सट्टामा तातो दूध पनि पिउन सकिन्छ ।
६.रुटिङलाई ख्याल राख्नुहोस् ः यदी चिसो मौसमा परीक्षा परेको छ भने अध्ययनको लागि रुटिङ बनाउनु होस् र सोही अनुसार अध्ययन जारी राख्नुहोस् । सक्नु हुन्छ भने विहानको समयलाई रोज्नुहोस् किनकी विहानको समय अध्ययनको लागि राम्रो मानिन्छ । भनिन्छ विहानपख गरिएको अध्ययन विर्सिंदैन ।
७. अध्ययन गर्ने स्थानको चयन गर्नुहोस् ः विहान–दिउँसो–बेलुकीको समयमा अध्यनको लागि स्थानको चयन गर्नुहोस् । खासगरी विहान बेलुका विस्तरामा या न्यानो कोठामा र दिउँसोमा घामलाग्ने पाहारीलो स्थान जहाँ हो हल्लाको कुनै प्रभाव पर्दैन त्यस्तो स्थानमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु होस् । जसले गर्दा पढ्नमा जाँगर लाग्छ ।
८.खेल खेल्नुहोस् ः खेल खेल्नको लागि पनि तपाइले केही समय निकाल्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । किनकी एक वा आधा घण्टा खेल्नाले अल्छीपना हट्छ र शरीरमा स्पूmर्ति बढ्छ । तसर्थ चाहे परिक्षा को समय होस् अन्य सामान्य अवस्था एकछिन् खेल खेल्नुहोस् । सकभर खेल खेल्दा शरीरबाट पसीना बाहिर निस्कीयोस तर थकाई नलागोस् । जस्तै भलिबल व्याडमेन्टन आदि ।
९. कहिले काहिँ पुस्तकालयमा अध्ययन गर्नुहोस् ः स्कुल या कलेजमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहा रहेको लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्नुहोस् । या त घर वरीपरि क्लबहरुले संचालन गरेका लाइब्रेरीमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । किनकी सबै खालका पुस्तक किनेर पढ्ने क्षमता सबै मानिसमा हुँदैन । तर पुस्तकालयमा थरी थरीका पुस्तकहरु पाउन सकिन्छ ।
१०. ग्रुपमा बसेर पढ्नु होस् ः अध्ययनका लागि एकान्त नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । कुनै कुनै विषय यस्ता हुन्छन् जसलाई समुहमा बसेर अध्ययन गर्दा आफुलाई अस्पष्ट भएका विषयहरुमा स्पष्ट हुन सकिन्छ । त्यसकालागि समूहमा बसेर पढ्दा फाइदा हुन्छ । समूहमा बसेर पढ्नको लागि चउर या पार्क उपयुक्त हुन्छ । यस्तो ठाउँमा बस्दा एक त खुल्ला वातावरण हुन्छ भने नजानेका दोधारे कुरा अस्पष्ट भएका सन्दर्भहरूका बारेमा तुरुन्त साथीहरु सँग सोधेर त्यसबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । यसरी गरेको अध्ययन विर्सिंदैन् । किनकी एउटा न एउटा रमाईलो सन्दर्भ त्यहाँ जोडिएको हुन्छ ।